Anoshanda Mawiricheya - Ultra mwenje Wiricheya | Karman® Performance
musha / Chinyorwa Wiricheya / Kushanda Wiricheya
Chero Chigadzirwa Kurema19.1 lbs kana zvishoma19.1 makirogiramu - 25 lbs25.1 makirogiramu - 35 lbs50 lbs kana zvimwe
Chero Rudzi rweLegrestwakasimbaKufamba KureInobviswa
Anoshanda Mawiricheya anoda Kwekumusoro Performance
S-Rakaumbwa Seating System Bhenefiti
MaWiricheya edu Anoshanda ari nyore kwazvo kufambisa uye yakafanana nevazhinji vemawiricheya emitambo ari kunze pamusika nhasi. Kana iwe uchirarama hupenyu hunomhanyisa uye iwe uri kutsvaga wiricheya iri Ultra lightweight uye aerodynamic, ipapo chikamu chedu chemawiricheya chinoshanda inogona kunge iri nzvimbo yekutanga yaunoda kutarisa.
Kana iwe uchida wheelchair inoshanda iyo inokodzera zvemitambo uye zvimwe zvinoitwa zvemuviri, yedu inoshanda wiricheya inoteedzana a lightweight furemu iine ruzivo rwakadzama kune dhizaini uye chimiro.
Akakosha maficha eS-ERGO ATX akateedzera anosanganisira compact macustoms ane akaomarara akarongeka furemu inopetwa. Iyo zvakare chigaro kukwirira chinogadziriswa, backrest inogadziriswa, uye zvimwe zvakawanda. Iyi ndiyo chaiyo wiricheya kune chero munhu anofarira mutambo akagadziridzwa agility uye anoda wiricheya inogona kuenderana nehupenyu hwavo.
Ive neshuwa yekutarisawo yedu Ultralight Kurema Chikamu iine akawanda mamwe masarudzo anowira mukati meichi chikamu chehuremu. Uyezve dzidza nezve ese sarudzo uye zvishongedzo izvo zvinogona kugadziridzwa newiricheya yakadai se Spinergy mavhiri® uye Frog Legs Kusimudzirwa ®. Mamwe eedu ERGO akateedzana mawiricheya anogona zvakare kuve nesarudzo dzakasiyana siyana kuti dziwedzerwe umo zvese zvawo pachazvo kupokana chinoshanda chemawiricheya chikamu uye chimiro cheiyo sportier wiricheya. Idzo sarudzo dzakakura saka ita chokwadi chekubvunza kune wako mutengesi nhasi!
Yedu S-Rakaumbwa Seating System inopa akawanda mabhenefiti pamusoro peyakajairwa manyore echicheya chigaro. Haingori chete kuti kumanikidzwa kunogoverwa zvakaenzana pamakumbo nekumashure, inopawo pekugara pakadzika uye inodzivirira kumberi kutsvedza.
Nyika yekutanga S-Yakaumbwa ergonomic zvigaro yakagadzirirwa zvakananga kunyaradzwa uye ergonomics. Iine anopfuura makumi maviri nemaviri patent uye yakatangwa seGlobal Chigadzirwa, ichi chigadzirwa chakasarudzika chinokwanisa kudzikamisa kumanikidza, kudzikisira kutsvedza uye kusimudzira kumira kwakanaka.
Ese edu maS-ERGO mafuremu ANOEDZWA. Uku kupokana kwakasangana neUltralight Kurema, Ergonomics, uye Kuchengeteka mupfungwa uye neyakaguma chigadzirwa kumisikidza bhaji yemhando yepamusoro inogoneka. Dzidza zvimwe zvakasarudzika mamakushini anorapwa ne AEIGIS® kupa iyo anti-microbial yakavharwa zvigaro sisitimu. Iwo akanakisa emawiricheya akanakisa anoitirwa iwe chete nekuti iwe unokodzera.
Kutsvaga Iyo Yakafanira Wiricheya to FIT YAKO inokosha zvikuru. Ndokusaka isu takaparura nyowani ERGO FIT ™ Campaign yakavakirwa pazvakakodzera Wiricheya Ergonomics, uchienzanisa uye uchisiyanisa miviri yako miviri inoda, yako Mawiricheya Zviyero, uye zvakare kuenzanisa nharaunda yauchange uchinakidzwa newiricheya yako.
Kunyangwe iri yekunze nzendo uye kuona kuti kukwira ramp ine hushoma huwandu hwekuramba, kana kuve wakasununguka sezvinobvira nekuda kwekushandisa kwenguva refu, yedu ERGO FIT ™ nzira inopa huwandu hwakawanda hwe sarudzo uye zvishongedzo, kana mamodheru ane akasiyana misiyano yakagadzirirwa kuwedzera kufamba kwako uye nyaradzo.
Kutsvaga mhinduro yakasarudzika yeAnoshanda Wiricheya?
Iyo ATX modhi ndeyechokwadi chemberi cheya iyo isingori chete neyese mabhenefiti ekushandura nzvimbo yegiravhiti, asi zvakare ichipa kufungidzira mashandiro emushandisi ayo anoda kugona kwakanyanya kuita. Seyakakwira bhasikoro remitambo rakagadzirirwa kukwikwidza, chikamu ichi chinongoda zvakanakisa uye hapana chakaderera. Kiyi yeiyi kuziva yako zviyero uye zadza fomu redu rekuraira. Iwe ungangoda kubvunza yako ATP kana nyanzvi yezvokurapa kuti uwane nhungamiro kana iwe uine chero pre-iripo marapirwo mamiriro. PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawicheya emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo yakareruka kupfuura yakasununguka wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako: